မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟန်းဖုန်းလို့ခေါ်ကြသည့် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာသည့်အခါ ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်သုံးနိုင် သူတွေ ဂုဏ်တက်ကြသည်။ ရင်ကော့ကြသည်။ လူပုံအလယ်မှာ ဟန်းဖုန်းပြောရတာ အရမ်းဂုဏ်တက်သည်။ အရသာရှိသည်။ လူသူမမြင်ကွယ်ရာ အိမ်ထဲမှာဟန်းဖုန်းမပြောဘဲ လမ်းပေါ်တက်ပြီး စကားပြောပြသည်။ ဟန်းဖုန်းကိုင်နိုင်တာ၊ သုံးနိုင်တာကို ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ပြီး အထင်ကြီးခံချင်လို့ လူမြင်ကွင်းကိုထွက်ပြီး ဟန်းဖုန်းပြောသည်။ ရယ်စရာ တော်တော်ကောင်းသည်။
ခေတ်မီတိုးတက်သည့်နိုင်ငံတွေမှာ မူလတန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ အိမ်ဖော်၊ ဆိုက်ကားသမား၊ ဂျပိုး၊ သူခိုးက အစသုံးနိုင်သည့် ဟန်းဖုန်းကို ဒီနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်တွေနှင့် ခရိုနီသူဌေးတွေသာကိုင်ခွင့်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ကိုင်ကွယ်အသုံးပြုနိုင်သူတွေ ဘ၀မြင့်ကြသည်။ ကြွား ကြသည်။ ဂုဏ်ယူကြသည်။ စာရေးဆရာမ အဘွားကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင် သူ့မှာ ဟန်းဖုန်းရှိကြောင်းကို အများပြည်သူနှင့် စာဖတ်ပရိသတ်တွေသိအောင် မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်တွေက အခန်းဆက်ဆောင်းပါး ရေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တောင် နှစ်ပုဒ်လောက် ဖတ်လိုက်ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟန်းဖုန်းကိုင်ချင်လျှင် လျှောက်လွှာတင်ပါဆိုလို့ လျှောက်လွှာတင်ကြသည်။ ကျွန်တော် မတင်ပါ။ မကိုင်ချင်လို့ မတင်ပါ။ စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမှာတောင် စတိုးဆိုင်မှာ အလွတ်ဝယ်လို့ရသည့် ဟန်းဖုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှောက်လွာတင်ရမည်ဆိုသည့် အတွက်မတင်လိုပါ။ စင်ကာပူမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီက ဆင်းကဒ်ဝယ်လျှင် တယ်လီဖုန်း (ဟန်းဆက်) အခမဲ့ပေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟန်းဖုန်းသည် အထက်တန်းလွှာ လူတန်းစားအတွက်သာ သီးသန့်ပစ္စည်းဆိုသည့်အတွက် မကျေနပ်လို့ မကိုင်ချင်ပါ။ ဆင်းရဲသားအခြေခံ လူတန်းစား အတွက် မခံချင်လို့ မကိုင်ချင်ပါ။ ဟန်းဖုန်းကိုင်နိုင်တာဟာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်လို့ ထင်သည့်အတွက် လျှောက်လွှာ မတင်ဘဲ နေပါသည်။
ကျွန်တော်မိသားစုက ကျွန်တော်မသိအောင် ကျွန်တော်နာမည်ကိုသုံးပြီး လျှောက်လွှာတင်ကြသည်။ ရှိစု မဲ့စု ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ဖော်ပြပြီးလျှောက်ကြတယ်။ စစ်သားလူထွက်၊ သင်္ဘောသားဟောင်း၊ စာရေးဆရာဆိုတာတွေဖော်ပြသည်ဟု သိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုမှာသာမက၊ တစ်ဆွေလုံး၊ တစ်မျိုးလုံးမှာပင် အဲဒီလောက်ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြနိုင်တာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းသာရှိသည်။ ကျန်တာတွေက ပျံကျလုပ်သား၊ လယ်သမား၊ရေလုပ်သားတွေ ဖြစ်သည်။ ဟန်းဖုန်းနှင့် မိုင်ပေါင်းကုဋေလောက်ဝေးသည့် လူတန်းစားတွေ ဖြစ်သည်။
သုံးနှစ်လောက်အကြာမှာ လျှောက်လွှာဆယ်စောင်လောက် လျှောက်ထားရာမှာ ဘယ်လျှောက်လွှာကပေါက်မှန်း မသိရသည့် အကြောင်းကြားစာတစ်စောင် စာတိုက်ကရောက်လာပါသည်။ စာပို့လူလင်ကို မုန့်ဖိုး ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးပြီး စာလက်ခံလိုက်ရသည်။ သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီးပေါက်သလို မိသားစု ၀မ်းသာကြတာ တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်က ရယ်ချင်လို့ ပြုံးလိုက်မိသည်။ မြန်မာလူမျိုး သန်းခြောက်ဆယ်မှာ လူဦးရေ တစ်သိန်းပြည့်အောင်တောင် ဟန်းဖုန်းမကိုင်နိုင်သေးသည့် နိုင်ငံပါလားလို့ဝမ်းနည်းစွာ တွေးနေမိသည်။
မဲပေါက်သည့် ဂျီအစ်စ်အင်းကတ်ကို သွားထုတ်သည့်အခါ ၁၅ သိန်းပေးခဲ့ရသည်။ ဟန်းဆက်ဘတ်ထရီနှင့် အားသွင်းကိရိယာတွေမရခဲ့ပါ။ တာဝန်ရှိသူက အဲဒါကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်သည့်ဆိုင်တွေကို ညွှန်းပေးပါ သည်။ အဲဒီ ပစ္စည်းတွေကို လက်ခံရရှိကြောင်း၊ ပျက်လျှင် ပြင်ပေးပါမည်။ ပျောက်ဆုံးလျှင် လျှော်ပေးပါမည်ဆိုတာ လက်မှတ်ထိုး ခဲ့ရပါသည်။ ဒီတော့မှ ၁၅သိန်းတန်ဆင်းကဒ်သည်။ အပိုင်ရတာမဟုတ်၊ ခေတ္တ ဌားကိုင်ရတာဖြစ်ကြောင်း သိရတော့ သည်။ အချိန်မရွေး ပိတ်သိမ်း၊ ပြန်သိမ်းတဲ့နည်းဖြင့် ၁၅ သိန်း ဆုံး နိုင်ကြောင်းကို စာချုပ်မှာရေးထားသည်။ ဟန်းဖုန်း ထုတ်ယူလာသည့်အခါ ကျွန်တော့်ဇနီး ဒေါ်ဖြူတုတ်က ပြောသည်။
“ဒီဖုန်းကို ရှင်ကိုင်ရမယ် ...”
“ဘာအတွက် ငါကိုင်ရမလဲ၊ မကိုင်ချင်ဘူး”
“အကြောင်းရှိတယ် နောက်တော့သိလိမ့်မယ်။ ရှင်ပဲကိုင်ရမယ်၊ မကိုင်ချင်လို့ မရဘူး”
ကျွန်တော်ဇနီး ဒေါ်ဖြူတုတ်က ကျွန်တော့်ကို ဟန်းဖုန်းကိုင်စေချင်သည့်အကြောင်းကို မကြာခင် သိရတော့သည်။ ရှင်အခု ဘယ်မှာလဲ”
“လေထန်းကုန်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာ တွေနဲ့အတူ ထိုင်ပြီးစာအကြောင်း ပေအကြောင်း ပြောနေတာပေါ့ကွယ်”
အရည်မရအဖတ်မရ စကားတွေပြောပြီး အချိန်ဖြုန်းနေတယ်ပေါ့။ အခုချက်ချင်း ပြန်လာခဲ့”
ကျွန်တော့်ကို ဟန်းဖုန်းကိုင်စေချင်တာအကြောင်းရှိတယ်၊ နောက်တော့ သိလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဒါပဲဖြစ်မည်။ ကျွန်တော့် ကို ချည်တိုင်ပြန်ဝင်ခိုင်းရာမှာ သုံးဖို့အတွက်ဆိုတာ သိလိုက်သည်။ ဒီဟန်းဖုန်းအပေါ်မှာ စကတည်းက မကျေနပ် ဖြစ်နေတာ အခုတော့ပိုပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်လာသည်။ ၁၅ သိန်းတောင်ပေးထား ရသည့် တယ်လီဖုန်းဖြစ်လို့ မတရား လုပ်ခံထားရတယ်ထင်ပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်။
ဒီကြားထဲမှာ ၅သိန်းတန်ဟန်းဖုန်းဆိုတာ ပေါ်လာပြန်သည်။ ငါးသိန်းနဲ့ ဟန်းဖုန်းကိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်က ၁၅သိန်းပေးပြီး ငှားကိုင်နေရသူဖြစ်လို့ မကျေနပ်ချက်က ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ဟောမကြာပါဘူးဗျာနှစ်သိန်းတန် ဟန်းဖုန်းဆိုပြီး ပေါ်လာပြန်သည့် အခါမှာတော့ ကျွန်တော်မကျေနပ်ချက်သည် အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်သွားလေတော့သည်။ ဟန်ဖုန်းကိုင်ခိုင်းသည့် ကျွန်တော့်ဇနီးကို မဲတော့သည်။
“နင့်ကြောင့် ပိုက်ဆံ ၁၅ သိန်းတောင်ပေးခဲ့ရတယ်။ အခု နှစ်သိန်းနဲ့ရနေပြီလေ”
သူ့အပြစ်နဲ့သူဖြစ်နေလို့ ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ငြိမ်ခံနေသည်။ သူ့အတွက်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာတပ်ဆင်ပေးထားရလို့ ကျေနပ်နေပုံသည်။ ဒီအခြေအနေမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ လင်းမယား ကွဲလောက်သည့်နောက်ဆုံးအခြေအနေ ဖြစ်လာပြန်သည်။ ၁၅၀၀ တန်ဆင်းကဒ်တွေ ရောင်းချပေးနေ ပြီးဆိုသည့်သတင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်၏မကျေနပ်မှုသည် အထွတ်အထိပ်မှ ပေါက်ကွဲသည့်အဆင့် ကိုရောက်သွားတော့သည်။
“၁၅၀၀ နဲ့ လူတိုင်း ဟန်းဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ ခေတ်မှာ ငါ့ဟန်းဖုန်းက ၁၅သိန်းပေးရတယ်။အဲဒါနင့်ကြောင့် ရွှေ ၁၅ ကျပ်သား ၀ယ်ထားလိုက်ရင် သိန်းတစ်ရာကျော်ဖြစ်နေပြီ။ အခုတော့ ၁၅ကျပ်နဲ့ ၁၅သိန်း ဂုဏ်ရည် အတူတူ ဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒါနင့်ကြောင့် နင့်ကြောင့်”
မဖြူတုတ်က အရေထူသည် ကျွန်တော် ပြောချင်တာပြော၊ ဂရုမစိုက် ကျွန်တော့်ကို ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာ တပ်ဆင်ပေးထားရသည့်အတွက် ကျေနပ်နေသည်။ ကျွန်တော် ဟန်းဖုန်းကိုစိတ်နာနေလို့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုင်ဖို့မေ့နေသည် မြို့ထဲသွားတာ ယူသွားဖို့မေ့သည်။ စာရေးစာပွဲပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဟန်ဖုန်းကို ဘယ်တော့မှမပိတ် နေ့ရောညပါ အမြဲဖွင့်ထားသည်။ စာရေးစာပွဲပေါ်မှာ စက်ဖွင့်လျှက် ပဲမေ့ကျန်နေခဲ့တာဖြစ်သည်။ မဖြူတုတ်၏ အမိန့်သံ “ရှင်ဘယ်ရောက်နေလဲ၊ အခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့” ဆိုသည့် လေသံမာမာကို မကြားရသည့် အတွက် စိတ်ချမ်းသာသည်။ ညနေမိုးချုပ်တော့မှာ အိမ်ကိုပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့မှ လေသံ မာမာကို ကြားရတော့သည်။
အခု ဘယ်ကပြန်လာလဲ။ ပဂိုးကလား၊ တွံတေးကလား၊ ကျောက်တန်းရေလယ်ဘုရား ကလား၊ရှင့်အနားမှာထိုင်၊ ရှင့်တယ်လီဖုန်းကိုကိုင်ပြီး ကျူပ်ခေါ်လိုက်တိုင်း ပြန်ဖြေနေတဲ့ အကောင့်မက ဘယ်ကအကောင်မလဲ၊ ကျုပ်ကို အားမနာ “လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်ရှိ နေပါသဖြင့်ခေါ်ဆို၍ မရနိုင်ပါရှင်လို့ ပြောလိုက်၊ မအားသေးပါရှင်လို့ ပြောလိုက်၊ တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိသေးပါရှင်လို့ လိမ်လိုက်၊ ဌာနမှ ခေတ္တပိတ်ထားပါသည်ရှင် ဆိုတာတောင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီကောင်မက ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်ကို အတူ သွားခဲ့ကြတာလဲ”
နင်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ၊ ငါ့မှာ တယ်လီဖုန်းပါမသွားဘူး၊။ ဟော့ ဟိုမှာတွေ့လား၊ စာရေးစားပွဲပေါ်မှာမေ့ကျန်နေခဲ့တယ်”
“အေးဟယ်၊ ဟုတ်သားပဲ၊ ဒီတယ်လီဖုန်းကလည်း အိမ်ကနေပြီး အမျိုးမျိုး ပြန်ဖြေနေတာပဲ”
မဖြူတုတ်သည် မချိုမချဉ်မျက်နှာဖြင့် ကျေနပ်သွားသည်။ ကျွန်တော် မြို့ထဲသွားစဉ်က တယ်လီဖုန်းယူ သွားမိရင် လင်မယားကွဲနိုင်သည်။ တော်ပါသေးရဲ့ဟု တွေးမိသည်။ ။
မြန်မာ မင်းသမီးလေးများ သေနတ်ကိုင်ပြီး Sexy ကျကျဓာတ်ပုံများ ရိုက်လာ
ဒီမိုကရေစီ ရရှိလာသည့် နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ မိန်းကလေး အများအပြား ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ယိုယွင်း လာသည်ကို မကြာခဏဆိုသလို အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် တွေ့ရှိနေရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမျိုး သမီးများထဲမှ အချို့သည် တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသည့် စိတ်အပြည့်ဖြင့် သေနတ်များ ကိုင်ကာ ဓါက်ပုံရိုက်လျက်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်နေရပါသည်။
တစ်ချို့ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသမီး စစ်မှု့ထမ်း ခေါ်ဆိုမှုအား အများအပြား စိတ်ဝင်စားကာ တပ်မတော် တွင် အမှုထမ်းလိုကြောင်းကိုလည်း မကြာခဏ ပြောဆိုနေမှုများကို လည်း တွေ့မြင်နေ ရပါတယ်။ မည် သို့ပင်ဖြစ်စေကာမှု ထိုကဲ့သို့ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် အမှု့ထမ်း လိုသော အမျိုးသမီး များအား မြန်မာ မိန်းကလေး များစွာ အတုယူသင့်ပေသည်။
By Myanmar Daily Star
အများသုံးဘိုထိုင်အိမ်သာများမှ ကာလသားရောဂါနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါများ ကူးစက်နိုင်
အများသုံး ဘိုထိုင်အိမ်သာများသုံးရာတွင် ကျန်းမာရေးသတိပေါ့ဆမှုကြောင့် ကူးစက်မြန်ရောဂါများဖြစ်သည့် အရေပြားရောဂါ၊ ကာလသားရော ဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါ များကူးစက်မှုလွယ်ကူနိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးများက ပြောကြား လိုက်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဘိုထိုင်အိမ်သာ များ မသန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့် ကူး စက်ရောဂါများဖြစ်သော ကာလ ဝမ်းပျက်ရောဂါ၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သောအရည်များမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ၊ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အရေပြားရောဂါများနှင့် ယင်း အိမ်သာရေများမှတစ်ဆင့် ကူးစက် နိုင်သည်ဟု သိရသည်။
''တော်ရုံတန်ရုံ ဒီက ရောဂါ ကူးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိတာပဲ။ ဒါ ပေမဲ့ ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ ခုက နေရာ တကာ ဘိုထိုင်ဖြစ်နေပြီ။ အများ သုံးအိမ်သာတွေဆို ပိုဆိုးတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွေက ဘိုထိုင်တွေမှာ ဆို တစ်ခါသုံးဆီစိမ်စက္ကူတွေ သုံး ကြတယ်''ဟု အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာဝင်းထွဋ်က ပြောသည်။
အဆိုပါအများဘိုထိုင်များ ကို သန့်ရှင်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးပါ သော်လည်း ရောဂါကူးစက်မှုများ မှာ မြန်သည်နှင့်နည်းသည်လောက် သာရှိသည်ဟုသိရပြီး ယင်းကတစ် ဆင့် ကာလသားရောဂါပါ ကူးစက် နိုင်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
''အမျိုးသားတွေက ကာလ သားရောဂါ ကူးစက်နိုင်တယ်။ မိန်းကလေးတွေကျတော့လဲ ဆီး လမ်းကြောင်းမှာ ပိုးဝင်နိုင်တယ်။ အဲဒီဆီးလမ်းကြောင်းသာမက ဗက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေရှိတယ် ဆိုတာနဲ့ ကူးစက်နိုင်တာပဲ။ ဆေး ရုံ၊ ဆေးခန်းတွေမှာကျတော့ သူတို့ က ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူ နာတွေအတွက် သီးသန့်အနေနဲ့ လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာလဲ ပိုး သတ်ဆေးသုံးကြတာပဲ။ အများ သုံးအိမ်သာတွေမှာတော့ အမြဲ တမ်းပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ် နိုင်ရင် မြန်မာအိမ်သာတွေကိုပဲ အသုံးပြုစေချင်တယ်''ဟု သွား ရောဂါကု ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ပြောသည်။
''ခုက ဘိုထိုင်တွေပဲ အသုံး များကြတာလေ။ ရောဂါကူးစက် မြန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိကြ တာပဲ။ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ တစ် သျှူးနဲ့သုတ်ပြီး ထိုင်ဖြစ်တယ်။ အိမ်သာထဲမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆေးဖျန်းထားပါစေ လူ့ခန္ဓာကိုယ် ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကာကွယ်နိုင် မှာလဲ။ ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာ ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့''ဟု တောင်ဒဂုံ ရပ်ကွက်နေ မနုက ပြောသည်။
လူအများစုသည် ဘိုထိုင် အိမ်သာများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်း မာရေးအရ ရောဂါကူးစက်မှု မြန် ကြောင်းကိုသိသော်လည်း ကျန်းမာ ရေးအရ စိုးရိမ်မှုမရှိစွာဖြင့် အ သုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အကယ်၍ အများသုံးဘို ထိုင်အိမ်သာများ အသုံးပြုမည် ဆိုလျှင် မသုံးမီ ထိုင်မည့်ကာဗာ နှင့်အိမ်သာတွင်းကို ရေများဖြင့် ဆေးပေးခြင်းနှင့် တစ်သျှူးစများ ကို ဖြန့်ခင်း၍ထိုင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးမှ အသုံးပြုသင့်သည်ဟု သိရသည်။
မရေမတွက်နိုင်အောင်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ iPhone 5S,iPhone 5C,iPhone 6,တန်ဖိုးနည်း iPhone အစရှိတဲ့ သတင်းတွေကို မကြာခင် အဆုံးသတ် ဖို့တော့ရှိနေပါပြီ။မကြာခဏဆိုသလို ကောလဟာလတွေနဲ့ ထွက်ဖို့ တာဆူနေတဲ့ iPhone ကိုယခုအခါမှာတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၁၀ မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်ပြသတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တွေကိုမကြာခင်ကျွန်တော်တို့တွေအဆုံးသတ်ပေးဖို့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၁၀ မှာ Apple ရဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ် iPhone ကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြသ
ဒါကြောင့် iPhone အသစ်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ i ချစ်သူတွေအတွက် အဆိုပါ
ဟင်္သာတ၊ သြဂုတ် ၁၁
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြန်အောင်မြို့နယ် ရှားတော ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်တွင် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်က မောင်းနှင်နေသည့် TE 11 ယာဉ်ပေါ် လိုက်ပါ လာသည့် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မောင်အောင်မင်းထက်မှာ ကားကြမ်းပေါက် ကျွံကာ ယာဉ်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျ သေဆုံးကြောင်း မျက်မြင်များထံမှ သိရသည်။
မြန်အောင်မြို့ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက် ဗောဓိပင်လမ်းရှိ တနင်္ဂနွေ ဆွမ်းပတ်သို့ ဆွမ်းဟင်းများ ယူရန် မြန်အောင် ရေနံမြေမှ အဆိုပါ TE 11 ကားဖြင့် အုန်းလက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ သံဃာအပါး ၃၀ နှင့် မောင်အောင်မင်းထက်အပါ ကျောင်းသား သုံးဦးတို့ သွားရောက်စဉ် ရှားတော အမှတ် (၁) ရပ်ကွက် အရောက်၌ ကားကြမ်းပေါက် ကျွံကာ ပြုတ်ကျ သေဆုံးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
ယာဉ်မောင်း ဦးလှိုင်သိန်းသည် မြန်အောင်မြို့ အုန်းလက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံကြွရာတွင် အမြဲတမ်း ကူညီလေ့ ရှိပြီး မြန်အောင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းက ၎င်းကို (ပ) ၁၃ /၂၀၁၃ ပုဒ်မ ၃၀၄ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း မြန်အောင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
ရဲ၊ မီးသတ်နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကို လူသတ်မှုဖြင့် စခန်းမှူးကိုယ်တိုင်အမှုဖွင့်
ဇော်ဇော်ထွေး | တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်
ဒလမြို့နယ်တွင် ရဲ၊ မီးသတ်၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါအ၀င် လူခြောက်ဦးကို လူသတ်မှုပုဒ်မဖြင့် မြို့နယ်ရဲစခန်းမှူးကိုယ်တိုင် စွပ်စွဲတိုင်တန်းသဖြင့် သြဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် အမှု ဖွင့်စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် ၂၉ ရက်ညက ဒလမြို့နယ် ညောင်ကုန်းရပ်ကွက်မှ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် မလှလှစိန် (ခ) မခင်ခင်ဝင်း သည် လမ်းတွင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုတွေ့ရာ “သူတို့ တွေဝိုင်းရိုက်တယ်၊ ရေထဲတွန်းချ တယ်” ဟု ပြောကာ မူးမေ့တက်ချက်သွားသဖြင့် ဒလဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရသည်။
နောင်တွင် သူမကိုတာမွေမြို့နယ်ရှိ အလုပ်သမားဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းကုသသော်လည်း ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် သေဆုံး ခဲ့သည်။
ထိုအမှုသည် မြို့နယ်စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် ရဲ၊ မီးသတ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများကို အမှုဖွင့်လိုက်သည့် ယခုအမှုနှင့် ကွင်းစက်ဖြစ်ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သေဆုံးသူ၏အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်မြင့်မြင့်ရီက သူ့ညီမသေဆုံးသည်မှာ သွေးရိုးသားရိုး မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သံသယ ရှိသဖြင့် ၎င်းဘာသာစုံစမ်းပြီး သြဂုတ် ၅ ရက်က ရဲစခန်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများက သူ့ညီမကို သေသည်အထိရိုက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာတိုင်တန်းခဲ့သည်။
ထို့အတူပင် မလှလှစိန်သေဆုံးမှုကို ကနဦးကရဲများက သေမှုသေခင်းဖြင့် အမှုဖွင့်ထားခဲ့သော်လည်း ထိုအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးသို့ ဥပဒေအကြံပြုချက် တောင်းခံရာတွင် ထိုရုံးကသြဂုတ် ၈ ရက်၌ ယင်းလူသေမှုကို လူသတ်မှုဖြင့် ပြောင်းလဲစစ်ဆေးသင့်သည်ဟု ပြန်လည်အကြောင်း ကြားလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် သေဆုံးသူမလှလှစိန် သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သေသူ၏အစ်မကိုပင် တရားလိုမလုပ်စေတော့ဘဲ မြို့နယ်စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် တရားလိုလုပ်ကာ ရဲ၊ မီးသတ်၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အပါအ၀င် လူခြောက်ဦးကို လူသတ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲ၍ အမှုဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲခံရသူများမှာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးညွန့်လှိုင်၊ ရာအိမ်မှူး ဦးပါ(ခ) ဦး အောင်မြင့်၊ ဆယ်အိမ်မှူး ဦးသိန်းထွန်း(ခ)ဦးကမာဒူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး ဦးကျော်ဦး(ခ)အပု၊ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး မြအေး၊ အရန်မီးသတ် တပ်စုမှူး ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း (ခ)မစိမ်းတို့ဖြစ်ကြသည်။
၎င်းတို့သည် သေဆုံးသူ မလှလှစိန်နှင့်မည်သို့အချင်းများကာ၊ ယခုလိုသေဆုံးသည် အထိဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမူ အသေးစိတ် မသိရသေးပေ။
ယခုအမှုကို ဒလရဲစခန်းတွင် အမှုအမှတ် (ပ)၃၅၃/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး စွပ်စွဲခံရသူများကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၂ လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုမည်ဟုလည်း တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်
အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒလရဲစခန်းသို့ မဇ္ဈိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ စစ်ဆေးနေကြောင်း တာဝန်ကျရဲက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ဇော်ဇော်ထွေး | တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၆ မိနစ်
"၅ရရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသမီးများက ချိန်းတွေ့ရာ တွင် ၎င်းတို့က ငွေကြေးအကုန်အကျခံကြောင်းပြော ခဲ့ပြီး ၃၉ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများက ၎င်းတို့၏အကုန်အကျခံမှုကို အမျိုးသားများက ငြင်းဆန်စေ ချင်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့"
၅ရရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုး သမီးများက ချိန်းတွေ့ရာတွင် ၎င်း တို့က ငွေကြေး အကုန်အကျခံ ကြောင်းပြောခဲ့ပြီး ၃၉ရာခိုင်နှုန်း သောအမျိုးသမီးများက ၎င်းတို့ ၏အကုန်ကျခံမှုကို အမျိုးသား များက ငြင်းဆန်စေချင်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးအများစုတွင် ချိန်း တွေ့ချိန်ကုန်ကျစရိတ်များကို မျှ ဝေကုန်ကျစေကြောင်းလည်း တွေ့ ရသည်။ လူသားများ၏စိတ်အား ထက်သန်မှုအပိုင်းကို နားလည် စေရန် လေ့လာမှုများပြုလုပ်နေ ကြောင်း ဖရီဒီရစ်က နယူးယောက် တွင် ဖွင့်လှစ်သောအမေရိကန် လူမှုရေးရာအဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် တွေ့ဆုံပွဲတွင်တင်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲကို ဩဂုတ်၁၃အထိပြု လုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
့Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကလပ်များတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အများစု ပါဝင်နေသည့် Day Party များ ပြုလုပ်မှု ပိုမိုများပြားလာ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကလပ်များတွင် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်အများစု ပါဝင်နေသည့် Day Party များ ပြုလုပ်မှု ပိုမိုများပြားလာပြီး အများစုမှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ နားလည်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းရှိ facebook စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် ကြော်ငြာခြင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ ဝေငှခြင်းများဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်များကြား ပျံ့နှံ့စေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ Day Party များ ပြုလုပ်မှုမှာ ယခုနှစ်အတွင်း ပိုမိုများပြားလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
Day Party များ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် နေရာများမှာ အလုံမြို့နယ်ရှိ Sky Wall ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်ရှိ IQ (သို့မဟုတ်) Cloud9၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ IT ကလပ် စသည့်နေရာများတွင် ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
''ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုးတန်းကျောင်းသူ သမီးက သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Day Club တွေကို ခိုးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာပြီးတော့ မျက်မြင်တွေ့ခဲ့တာပါ။ အများစုက ၈ တန်း ၉ တန်း ကလေးတွေပါ။ မိန်းကလေး အများစုက သရုပ်ပျက် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေ လုပ်ကြသလို ယောက်ျားလေးတွေရော မိန်းကလေးတွေပါ အရက်သေစာ သောက်စားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်တွေလည်း အများကြီး ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အရင်က ဒီလိုပွဲတွေ ပြုလုပ်တာ အရမ်းမများသေးပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်လကို အနည်းဆုံး တစ်ပွဲလောက် လုပ်လာကြတာကို တွေ့ရတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ သေချာစုံစမ်း တားမြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်'' ဟု တာမွေမြို့နယ်မှ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်ကိုဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ Day Party များ ပြုလုပ်ကြရာ၌ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အများစုသာ လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ကျောင်း (သို့မဟုတ်) ကျူရှင်များမှတစ်ဆင့် လာရောက်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ လက်မှတ်နှုန်းထားများမှာ ကျပ် ၄၅၀၀ ၀န်းကျင်မှ ကျပ် ၆၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့် သတ်မှတ်ကြပြီး လက်မှတ်ငါးစောင်နှင့်အထက် ၀ယ်ယူလျှင် တစ်ယောက်အခမဲ့ ၀ယ်ယူခွင့် ကဲ့သို့သော အထူးအစီအစဉ် များကိုလည်း သတ်မှတ်တတ်ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ Day Party များအား တစ်နေရာတည်းတွင် ပြုလုပ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ နေရာအသီးသီးတွင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြုလုပ်မည့်ရက် မတိုင်မီ တစ်ပတ်ခန့် အလိုတွင် အင်တာနက် စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် ကြေညာတတ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
''ပုလဲကွန်ဒိုနားက အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့မှာ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေ အများကြီး စုနေတာကို တွေ့ရတော့ ဘာပွဲရှိလဲ စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ Day Party လုပ်နေတာလို့ ပြောတယ်။ အများစုကတော့ လွယ်အိတ်လေးတွေနဲ့ လာကြတာဆိုတော့ ကျူရှင်တို့ ကျောင်းတို့ကနေ လာကြတာ ဖြစ်ဖို့များတယ်။ ကောင်လေးတွေက စီးကရက် ကိုယ်စီလက်ကြားညှပ်လို့၊ ကောင်မလေး တချို့လည်း ဘီယာဘူးလေးတွေကိုင်လို့၊ အများစုကတော့ တော်တော်ကြီးကို ခေတ်လွန်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ၀တ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ သေချာတာကတော့ မိဘခွင့်ပြုချက်နဲ့ လာကြတာ တစ်ယောက်မှ ပါဟန်မတူဘူး။ ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကို ဘယ်လို ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့ လုပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်သူတွေက တာဝန်ယူပြီး လုပ်နေတာလဲ၊ မိဘတွေကရော ကိုယ့်သားသမီးတွေ ကျူရှင်တို့ ကျောင်းတို့မှာ စာသင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အထင်နဲ့ စိတ်ချလက်ချ ဖြစ်နေတာလား ဆိုတာတွေ စဉ်းစားမိပါတယ်။ အခုလို အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေချည်းပဲ စုထားတဲ့ပွဲမျိုး လုပ်တယ်ဆိုတာ အန္တရာယ် များပါတယ်။ ရန်ဖြစ်တာကစလို့ တခြားနောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်တွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်'' ဟု ရန်ကင်းမြို့နယ်မှ ကိုဇော်ဇော်က သူတွေ့မြင်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
Day Party များ ပြုလုပ်ရာတွင် Day Club များနှင့် ကွာခြားမှု မရှိကြောင်း၊ ဒီဂျေတီးပေးသည့် တီးလုံး သံစဉ်များအတိုင်း လာရောက်သူများမှာ ကကြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တချို့ Day Party များတွင် Sexy Dance ပြိုင်ပွဲများလည်း ထည့်သွင်း ပြုလုပ်ကာ ဆုပေးခြင်းများလည်း ရှိကြောင်း၊ အသက်ကန့်သတ်ချက် မရှိ ပါဝင်ခွင့် ပြုထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
''ကျွန်တော်တို့ ဒီပွဲတွေလုပ်တာက နားလည်မှုနဲ့ လုပ်တာပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ လုပ်မယ့် နေရာနဲ့ စီစဉ်သူနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ကြရတာ။ ရန်ဖြစ်လို့မရဘူး။ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်လို့မရဘူး။ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကကြခုန်ကြတာပဲ လုပ်လို့ရမယ်။ ပြဿနာ တက်ရင်တော့ လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့ နေရာလည်း အပိတ်ခံရမယ်၊ ပွဲစီစဉ်သူလည်း ပြဿနာ တက်မယ်ပေါ့လေ။ ဆယ်ကျော်သက် အများစုက ညပိုင်းတွေ အပြင်ထွက်လို့ မရတာမျိုးတွေရှိတော့ နေ့လယ်ပိုင်း ရှိုးပွဲတွေ စီစဉ်သလိုပဲ နေ့ခင်းပိုင်း ပါတီသဘော စီစဉ်တာပါ'' ဟု Day Party များ စီစဉ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဖြိုးဇော်က ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ Day Party များသို့ သွားရောက်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိ မသဲသဲက ''သမီး Facebook ၀င်ကြည့်ရင်းက ပါတီကြော်ငြာ တစ်ခုကို စတွေ့တာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြကြည့်တော့ သူတို့ကလည်း သွားဖူးချင်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ လုပ်တဲ့ရက်ကလည်း တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့ခင်းပိုင်းဆိုတော့ ကျူရှင်သွားမယ်ဆိုပြီး အိမ်ကိုညာပြောပြီး သွားကြတာ။ ဟိုရောက်တော့မှ သမီးတို့လိုပဲ ဆယ်ကျော်သက်တွေ အများကြီး တွေ့ရတယ်။ ပါတီက နေ့လယ် ၁ နာရီ ၀န်းကျင်လောက်မှာစပြီး ညနေ ၅ နာရီလောက်ကျမှ ပြီးသွားတာ။ အားလုံး ကခုန်ကြတာပါပဲ။ သောက်တာ စားတာရှိတော့ နည်းနည်းပါးပါး ရန်ဖြစ်တာတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ အိမ်က သိသွားရင် အဆူခံရမှာစိုးတာနဲ့ပဲ နောက်အခေါက်တွေတော့ မသွားဖြစ်တော့ဘူး'' ဟု သူ၏အတွေ့အကြုံအား ပြောကြားသည်။
ယခင်နှစ်များက ရန်ကုန်မြို့ တွင် Day Club များ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အများစု သွားရောက်ခြင်းကြောင့် အဆိုပါ Day Club များအား အရေးယူခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ အသွင်သဏ္ဍာန်တစ်ခု ပြောင်းလဲကာ Day Party များအဖြစ် ပြောင်းလဲ ကျင်းပလာကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဘန်ကောက် Bumrungrad ဆေးရုံ မှာ ဆေးကုသမှုခံယူမယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်
အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အစ်မဖြစ်သူ ဒီဇိုင်နာ အိကျော် ဇင်၊ တူမလေးတွေ နဲ့အတူ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် နေ့က ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဖို့အတွက် ဘန်ကောက်ကို သွားခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၂ ရက်နေ့က ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါ တယ်။ ဘန်ကောက်က Bumrungrad ဆေးရုံမှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
"ခါးနောက်ပိုင်းကနည်းနည်းနာနေတာ ၃ လကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီ။ အဲဒါကိုစစ်ကြည့်လိုက် တော့ ကျောက်ဖြစ်နေတယ်။ ကျောက်တည်တာပေါ့နော်။ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ပဲ အဲဒီဆေးရုံ မှာ ထပ်သွားကုပြီး ကျောက်ထုတ် ရမှာ ပေါ့။ အသံလှိုင်းနဲ့ ကျောက်ခြေတဲ့နည်း ကတော့ နောက်ဆုံးပေါ်လုိ့ပြော တယ်။ လူကိုလည်း ဘာမှမထိခိုက် ဘူး။ နာလည်းမနာဘူး။ ဘာမှ မခံစားရဘူး။ လုပ်ရင်လည်း အချိန် ပိုင်းလောက်ပဲ ကြာမယ်လုိ့ပြော တယ်။ ကျောက်က သိပ်အကြီးကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ထုတ်လိုက် တာ ကောင်း တာပေါ့။ ကျောက်ကပ်ရဲ့အောက်ပိုင်း ဆီးလမ်းကြောင်း မှာဖြစ်နေတော့ ဆရာဝန်က ထုတ်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ ကျောက်သွား ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က ၄၊ ၅ရက်လောက် နေရမယ် လို့ ပြောတယ်။ ဆေးရုံမှာနေစရာတော့ မလိုဘူး။ အသံလှိုင်းနဲ့ကုလို့ ရှိရင်
တစ်နာရီလောက်ပဲကြာ တယ်။ တစ်ခါလုပ်ပြီးရင် ဆရာဝန်က ပြန်စစ် မယ်။ ကျောက်ရှိနေသေး ရင် နောက်နှစ် ရက်လောက် နေရင် ပြန်ထပ် ချိန်းမယ်။ သွား လုပ်တဲ့အချိန်ကလည်း ခဏလေးပဲ။ ပြီးရင် ဟိုတယ် ပြန်နေပေါ့။ ဆေးရုံတက်နေစရာ တော့မလိုဘူး" လုိ့ ပြောပါ
တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ဘန်ကောက်ကို ဆေးကုဖို့သွား ရင်တော့ တူမလေး တွေမပါတော့ ဘဲ အစ်မ ဒီဇိုင်နာအိကျော်ဇင်နဲ့သွား ဖြစ်မယ် လို့ပြောပြီးသမီးလေး ပြေသုဒြာ က အိမ်မှာ အဘွား၊ ဖခင်ဖြစ်သူ ပြေတီဦး တို့နဲ့ပဲကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ အခုဆိုရင် သမီး လေး ပြေသုဒြာ ကလည်းဖခင်နဲ့ အတူ တင်းနစ်ကစားကွင်းကို လိုက် သွားတတ်ပြီး တင်းနစ်ကွင်းအကျယ်ကြီးထဲမှာ လျှောက်ပြေးနေရတာကို ပျော်နေတတ်တယ်လို့ အိန္ဒြာကျော် ဇင်က ပြောပါတယ်။ သြဂုတ် ၁ဝ ရက်နေ့မှာေ တာ့ ကြော်ငြာတစ်ခု ရိုက်ဖို့ရှိပြီး ယိုးဒယားဒါရိုက်တာနဲ့ ရိုက်ကူးရ မှာဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒြာ ကျော်ဇင်ကပြောပါတယ်။
SSA (ရွက်ဆစ်) ခွဲထွက်အဖွဲ့များ လက်နက်မဲ့ အလင်းဝင်ရောက်
SSA (ရွက်ဆစ်) ခွဲထွက် အဖွဲ့မှ မိုင်းယောင်းမြို့နယ် အတွင်း ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်က ဖမ်းဆီး ခဲ့သည့် ရွာသား ၆၃ ဦး ၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၌ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာခဲ့သည့် သတင်းအား သြဂုတ်လ ၃ ရက်ထုတ် မြ၀တီနေ့စဉ် သတင်းစာ တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ရွာသားများအား ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် ခဲ့သည့် SSA (ရွက်ဆစ်) ခွဲထွက် အဖွဲ့အား NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့မှ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်တွင် မိုင်းယောင်း မြို့နယ် ၊ မိုင်းဖန်ရွာ အနီး၌ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားပြီး လက်နက် / ခဲယမ်း များအား သိမ်းဆည်း၍ ပြန်လည် စေလွှတ် ပေးခဲ့ကြောင်း နှင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသည့် SSA (ရွက်ဆစ်) ခွဲထွက် အဖွဲ့ဝင် များအနက် မိုင်းယောင်း မြို့နယ် ၊ ၀မ်မန်း ကျေးရွာအုပ်စု မှ အိုက်အန် ၅၂ နှစ် ၊ နွဲ့ကျောက် ၂၀ နှစ် ၊ အိုက်ပီး ၄၀ နှစ် ၊ အိုက်ကျူ ၃၁ နှစ် ၊ အိုက်ကောင်း ၂၂ နှစ် ၊ အိုက်ယမ်း ၂၀ နှစ် ၊ အိုက်ခမ်း ၃၇ နှစ် ၊ အိုက်ခန်း ၄၈ နှစ် ၊ အိုက်အင် ၃၄ နှစ် ၊ အိုက်ဥ ၁၉ နှစ် ၊ အိုက်အွန် ၃၁ နှစ် နှင့် အိုက်ရွက် ၂၄ နှစ် ၊ ၀မ်တပ် ကျေးရွာအုပ်စု မှ အိုက်အွန် ၂၁ နှစ် ၊ အိုက်ကောင်း ၄၀ နှစ် ၊ နန်းကျွန်း ၅၆ နှစ် ၊ အိုက်တစ် ၃၀ နှစ် ၊ အိုက်ရှဲန်ရွက် ၁၉ နှစ် နှင့် နန်ဘွန်း ၃၁ နှစ် ၊ ၀မ်ဘိုး ကျေးရွာအုပ်စု မှ ဦးနွဲ့ရမ်း ၅၅ နှစ် ၊ ၀မ်ကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု မှ အိုက်အွန် ၂၆ နှစ် ၊ အိုက်အဲန် ၂၁ နှစ် နှင့် အိုက်ကွမ်း ၂၉ နှစ် ၊ မိုင်းယောင်း မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်မှ စိုင်းအောင်နိုင် ၂၆ နှစ် ၊ စုစုပေါင်း ၂၃ ဦးတို့သည် နယ်ခြေံ တပ်မတော် စစ်ကြောင်း များသို့ လက်နက်မဲ့ အလင်းဝင်ရောက် ခဲ့ကြောင်း နှင့် ၄င်းတို့အား ထောက်ပံ့ ကူညီမှုများ ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Facebook တွင် Sexy link ပုံ ပေါ်နေသောဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးပြန့်နံ့နေ
ဒီလိုပိုစ်မျိုး တက်လာခဲ့ယင် ***link ***
ကိုယောင်လို့တောင်မှမနိုပ်မိပါစေနဲ့ နိုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့် wallပေါ်မှာပါ ဒီလိုပိုစ်တွေအလိုအလျှောက်သွားပေါ်နေသည့်အပြင် Friend တွင် မြင်နေပါမည်။
ယခုပြထားသောပုံတွင်သာမက အလားတူ S link များကို ပါ သတိထားရပါမည်။
ငါးလွှာ အမြင့်ပေါ်မှ ခုန်ချရန် ကြံစည်သူ မလွင်မာလာဝင်းကို အချိန်မီ ကယ်တင်ခဲ့ပြီးနောက် စိတ်ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်နေသဖြင့် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ကာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ခံယူခဲ့ရာ ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်အရ ၎င်း၏ သွေးထဲမှ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲထား သည့် လက္ခဏာ နှင့် စိတ်ရောဂါ ခံစားမှု သွင်ပြင် လက္ခဏာတို့ကို တွေ့ရှိ ရသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“အစကတော့ သူ့ကို မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်း ကြံစည်မှုနဲ့ အမှု ဖွင့်မလို့ပါ၊ ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးစစ်ချက် အရ စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းကြောင်း တွေ့ရှိ ရတဲ့အတွက် ရွာသာကြီးကို လွှဲပြောင်းခဲ့တာပါ” ဟု ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ် (၈) ရပ်ကွက် လှည်းတန်းလမ်းရှိ တိုက်၂၃ E ငါးလွှာတွင် နေထိုင်သည့် ဦးအောင်ဟိန်းနှင့် ဒေါ်မေသက်ဦး တို့ နေအိမ်တွင် အိမ်ဖော် လုပ်ကိုင်သူ မလွင်မာလာဝင်းသည် အင်တာနက် ဆိုင်တွင် ထားရှိသော ခေါက်ဆွဲခြောက် သုံးထုပ် စာရင်း ကွာဟမှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့၏ နေအိမ်တွင် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့၌ နှစ်ဦးသား အငြင်းပွားနေစဉ် အင်တာနက်ဆိုင် အတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော စီစီတီဗီ ကင်မရာထဲမှ တွေ့ရှိမှုကို ပြန်လည် စစ်ဆေး ပြောပြရာမှ မလွင်မာလာဝင်း က ပြန်လည် တောင်းပန်သဖြင့် ထိုနေ့ နံနက်ပိုင်း (၁၀ရက်နေ့) က ကျေအေး သင့်မြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ၎င်းသည် မည်သူ့ကိုမှ အသိပေး ပြောကြားခြင်း မရှိဘဲ သြဂုတ် ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၂ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်က အိမ်ရှေ့ အ၀တ်ထွက်လှန်းရာမှ အခြားတစ်ဖက်ရှိ လူမနေသည့် တိုက်ခန်း (ခြောက်လွှာ) ဘက်သို့ ကူးသွားပြီး သေကြောင်း ကြံစည် ရန် ပြုလုပ်နေသည် ကို ပတ်ဝန်းကျင်က တွေ့ရသဖြင့် ဝိုင်းဝန်း ဖျောင်းဖျနေ စဉ် သင်္ကန်းဆိုင်မှ မန်နေဂျာ ဦးမောင်ဝင်း ဆိုသူ ရောက်ရှိလာပြီး တက်ရောက် ကယ်တင် ကူညီနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အိမ်ရှင် ဖြစ်သူ ဒေါ်မေသက်ဦးက ရှင်းပြသည်။
အသက် ၁၉နှစ် အရွယ်ရှိ မလွင်မာလာဝင်းသည် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ဝါးခယ်မမြို့နယ် ရွာသစ် ကျေးရွာ ဇာတိ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လပိုင်းခန့် က အဆိုပါ နေအိမ်တွင် ကလေးထိန်း အိမ်အကူ အဖြစ် စတင် လုပ်ကိုင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများထဲက မင်းသမီးချော Janie Tienphosuwan အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပါပြီ။ဖူးစာရှင်က တခုလပ် နိုင်ငံရေးသမား တယောက်ပါ။ ဘန်ကောက်နားက စမွတ်ပရာကန်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Chonsawat Asavahame ဖြစ် ပါတယ်။
၃၂ နှစ်အရွယ် မော်ဒယ်၊ မင်းသမီး နဲ့ ၄၅ နှစ်အရွယ် နိုင်ငံရေးသမား သူဌေးကြီးတို့ လက်ထပ်တဲ့သတင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ လူပြောများနေပါတယ် တဲ့။
သူတို့နှစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးမှာ လက်ထပ်စာချုပ် ချုပ်လိုက်ကြပါပြီ။ တွဲလာတာတော့ ကြာပြီပေါ့
သတင်းထောက်တွေကို ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရာမှာတော့ လက်ထပ်စာချုပ်ကို ထုတ်ပြသလို မင်းသမီး ဗိုက်မကြီးသေးကြောင်း/ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်း ဆရာဝန်ဆေးစစ်ချက်လည်း ထုတ်ပြပါတယ် တဲ့။
မင်းသမီး ကိုယ်လေးလက်ဝန်ရှိနေကြောင်း မီဒီယာတခုမှာ ဖွခဲ့တာကို တန်ပြန်ချင်တဲ့သဘော ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ တွဲနေတာ ၅ လ ရှိပြီ လို့ နိုင်ငံရေးသမားက ပြောပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဖြစ်မယ့်သတင်းကို အခုမှ ထုတ်ပြန်ရတာကလည်း အရင်အိမ်ထောင်နဲ့ ဖြတ်စရာရှိတာတွေ ဖြတ်နေရတာကြောင့်ပါပဲ တဲ့။
ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ ဆိုရင် .... နိုင်ငံရေးသမားက ဒီလိုပြောပါတယ် တဲ့။
"I like Ms Janie because she's cute and she's the person I can happily sleep with every night," Mr Chonsawat said.
သူ့ကို ကြိုက်တာက ချစ်စရာကောင်းလို့၊ ညတိုင်း ကြည်ကြည်နူးနူး အတူအိပ်နိုင်မယ့်သူဖြစ်လို့ပါပဲ လို့ ဘာသာပြန်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
မင်းသမီးကလည်း ဒီလို ဆိုပါတယ် ...
Ms Janie said she wanted to apologise to the public for not speaking out about the relationship earlier.
"Other people may see Mr Chonsawat asadifferent person than I do.
I think he isawarm, calm and discreet person, and we'll see how it goes," the 32-year-old superstar said.
"I want to thank Chonsawat for everything he has done for me."
တခြားသူတွေကတော့ ကျမ မြင်သလိုမျိုး Mr Chonsawat ကို မြင်ကြမယ် မဟုတ်ဘူး။ ကျမ ထင်တာကတော့ သူက နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိတယ်၊ တည်ငြိမ်တယ်၊ သိုသိုသိပ်သိပ်ရှိတယ်၊
ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ ကြည့်ရဦးမှာပေါ့ရှင်။ ကျမအတွက် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတိုင်းအတွက် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံရေးသမားရဲ့ အရင်အိမ်ထောင်က ၅၃ နှစ်အရွယ် Nantida Kaewbuasai ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဟောင်းနဲ့အတူမနေတာ ဆယ်နှစ်ကြာပြီ၊ ရခဲ့တဲ့သမီးတယောက်က အခုဆို အသက် ၁၈ နှစ် ရှိနေပါပြီ တဲ့။
ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာ သတင်းတပုဒ်မှာတော့ သူက နာမည်ကျော် မင်းသမီးတွေ ဘာတွေနဲ့ ချိန်းတွေ့ခဲ့သူလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ ... စွံတဲ့သူ၊ ပွေတဲ့သူ ဆိုပါစို့။
ဒီအမျိုးသားရဲ့ဖခင်က ဒုဝန်ကြီးဟောင်း တဦးဖြစ်တဲ့ Vatana Asavahame ဖြစ်ပါတယ်။
လာဘ်စားမှုတခုမှ မျက်ကွယ်ထောင်ဒဏ်ပေးခံရထားပြီး အခုတော့ အိမ်နီးချင်း ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ခိုလှုံနေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
လန်ဒန် - ဤအမှုသည် အမျိုးသမီးပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်အား မတရား ပြုကျင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုကျင့်ခဲ့သော ဥရောပ၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် မကောင်းဆိုးဝါးသဖွယ် ပြုကျင့်ခဲ့သူ၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ တရားခံ ဂျိုးရဂ်အား ယခုမတ်လတွင် ဒီအင်န်အေနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပြီးနောက် စီရင်ချက်ချမှတ်ရန် ရုံးချိန် ပေါ်ထားသော အမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အမျိုးသမီး ၁၀၀၀ ကျော်အား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရား ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ သည်။ ၎င်း၏ နောက်ဆုံးအမည်အား ဂျာမန်ဥပဒေအရ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခွင့် မရှိကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းသည် The Silence Of The Lambs ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားထဲမှ ဇာတ်လိုက်ကဲ့သို့ ဒဏ်ရာရရှိထားသော ဒုက္ခသည်တစ်ဦးပမာ ဟန်ဆောင်ကာ သားကောင်ရှိရာ အိမ်တစ်အိမ်အား တံခါးခေါက်ကာ အိမ်သာ အသုံးပြုခွင့်တောင်းသည်။
ထို့နောက် အဓမ္မပြုကျင့်မှုကို ကျူးလွန်တော့သည်။ ၎င်းသည် ဟော်လန်၊ ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် လူဇင် ဘတ်များတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော မုဒိမ်းမှု ၂၀ မှုကိုလည်း ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ဂျိုးရဂ်သည်သူ၏ဇနီး၊ သူ၏ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ဂျာမနီတောင်ပိုင်းရှိ ကွန်စတန်ကန်သို့ အားလပ် ရက်ခရီးထွက်စဉ် မိသားစုထံမှ ခဏလစ်ထွက်သွားခဲ့ပြီး ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပြီးနောက် မိသားစုထံ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့သောပုံစံမျိုးနှင့် ပြန်လာတတ်သူဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ထိုကဲ့သို့သော မုဒိမ်းမှုကိုးမှုအား ကရီဖီးလ်၊ ကိုလိုဂန်နှင့် အေချိန်တို့တွင် ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်။ သူသည် မိန်းမပျက်များထံသွား၍ ထိုအကျင့်ကို ဖျောက်ပစ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အလုပ်မဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ တရားခံ၏ ဖြောင့်ချက်နှင့် ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် ၎င်းအား နောက်လတွင် စီရင်ချက်ချမှတ်ရန် ရုံးချိန်းပေးထားပြီး အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်နှင့် စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံတွင် ကာလရှည်သက်တမ်းဖြင့် နေထိုင်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရောဂါ ဝေဒနာ တစ်ခုခုကို ခံစားနေရပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်း သူတွေဟာ ခံတွင်းပျက်ပြီး အစာ စားချင်စိတ် လျော့နည်း တာကြောင့် ကိုယ်အလေး ချိန်တွေ လျော့ကျ လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ်ခံ စွမ်းအား
လျော့ကျပြီး ရောဂါဝေဒနာကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု လျော့နည်းလာပြီး ပိုမို နေထိုင်မကောင်းတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ အစာစားချင်စိတ် ပြန်ကောင်းလာအောင် လိုက်နာ သင့်တဲ့ နည်း လမ်းတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
မိသားစုစုံညီ သို့မဟုတ် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ စားပါ
တစ်ယောက်တည်း အစာစားရင် အစာစားရမှာကို ပျင်းနေတတ်ပါတယ်။ အစာစားချိန်ဆိုတာ လူအများနဲ့ ပေါင်းဖော်ပြီး အတူစားရတဲ့ အချိန်ပါ။ အများနဲ့အတူ မစားရင် အထီးကျန်တဲ့ စိတ်ခံစား မှု ဖြစ်စေပြီး အစာစားချင်စိတ် လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ မိသားစု စုံညီ အစာစားပါ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်မှာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ အစာစားပါ။
စားချင်စိတ်ရှိသော အစာကို စားပါ
ကျွန်မတို့တွေဟာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစာဆိုရင် များများ စားချင်တတ်ကြပါတယ်။ ခံတွင်းပျက်နေချိန်မှာ အစာစားချင်စိတ် ဖြစ်လာအောင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစာကို စားပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစာဆိုရင် အများကြီးမစားပါနဲ့။ သစ်သီးတွေကို စားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အများကြီး မစားနိုင်ရင် သစ်သီးဖျော်ရည် ဖျော်သောက်ပါ။ သစ်သီးစိတ်တွေကို အရသာရှိအောင် ပြင်ဆင်ပြီး စားပေးပါ။
အစာကို နည်းနည်းနှင့် မကြာခဏ စားပါ
ခံတွင်းပျက်ကာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျနေသူတွေ အနေနဲ့ ကယ်လိုရီများများ ရရှိစေဖို့ တစ်နေ့မှာ အစာက နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏ စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ အစာကို ငါးကြိမ်- ခြော က်ကြိမ်ခန့် စားပေးတာက အာဟာရဓာတ်တွေကို ပိုမို ရရှိစေမယ့်နည်းပါ။
ပြင်းသောအနံ့ပါ ဟင်းလျာများ ရှောင်ပါ
ခံတွင်းပျက်နေချိန်မှာ အရသာခံအာရုံနဲ့ အနံ့ခံအာရုံ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အနံ့ပြင်းတဲ့ အစာတွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာနေပါ။ ဥပမာ- ညှီတဲ့ အသားတွေကို ထမင်းပွဲမှာ မပါအောင် သတိထားပါ။
အာဟာရ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကို မှီဝဲတာကြောင့် ကယ်လိုရီစားသုံးမှု တိုးစေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုး ထုတ်ထားပြီး အနံ့အရသာ မျိုးစုံ ရှိတာကြောင့် ခံတွင်းပျက်နေသူတွေ အနေနဲ့ အစာစားချင်စိတ် တိုးလာအောင် မှီဝဲသင့်ပါတယ်။
ဟင်းလျာထဲ သဘာဝ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ထည့်ချက်ပါ
သဘာဝ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ ပါတဲ့ အစာတွေက အစာစားချင်စိတ်ကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တွေကတော့ ငရုတ်ကောင်း၊ ဂျင်စင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန် နီ၊ လေးညှင်း၊ စမုံစပါး၊ ချင်း (ဂျင်း)၊ လက်ဖက်စိမ်း စတာတွေ ဖြစ်ပြီး သင်ချက်တဲ့ ဟင်းလျာထဲမှာ ထည့်ချက်သင့်ပါတယ်။
နွားကို ဝင်တိုက်မိသည့် အင်ဒိုနီးရှား ခရီးသည်တင်လေယာဉ် လမ်းချော်မှုဖြစ်
Lion Air လေကြောင်းလိုင်းမှ ဂျက်လေယာဉ်သည် ခရီးသည် (၁၁၀)ကို တင်ဆောင်ပြီး ဆူလာဝေဆီကျွန်းရှိ ဂိုရွန်တာလို လေဆိပ်ကို ဆင်းသက်စဉ် ယခုကဲ့သို့ သည်းထိတ်ရင်ဖို အခြေအနေ ကြုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင် နွားမတစ်ကောင်ကို ဝင်တိုက်မိသည့်အတွက် ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စင်း လမ်းကြောင်းချော်ထွက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ Lion Air လေကြောင်းလိုင်းမှ ဂျက်လေယာဉ်သည် ခရီးသည် (၁၁၀)ကို တင်ဆောင်ပြီး ဆူလာဝေဆီကျွန်းရှိ ဂိုရွန်တာလို လေဆိပ်ကို ဆင်းသက်စဉ် ယခုကဲ့သို့ သည်းထိတ်ရင်ဖို အခြေအနေ ကြုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လေယာဉ်သည် အရှိန်လျော့ပြီး ဖြစ်နေကာ ရပ်နားမည့် နေရာသို့ ဦးတည်မောင်းနှင်စဉ် ပြေးလမ်းပေါ်တည့်တည့် လျှောက်သွားနေသည့် နွားမသုံးကောင်နှင့် တိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နွားမတစ်ကောင်သည် ယခုဖြစ်စဉ်အတွင်း သေဆုံးသွားသလို လေယာဉ်လည်း လမ်းကြောင်းပြောင်း ချော်ထွက်သွားခဲ့သည်။
ခရီးသည်များရော၊ လေယာဉ် အမှုထမ်း (၇)ဦးတို့ပါ မည်၍မည်မျှ ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း တိတိကျကျ မသိရသေးသော်လည်း အခြေအနေ ဆိုးရွားဖွယ် မရှိဟု သတင်းများက ဆိုသည်။ လေယာဉ်သည် အတန်ငယ် ထိခိုက် ပျက်စီးသွားကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အလွန်ပြင်းထန်မှု မရှိသည့်တိုင် လေယာဉ်ခရီးစဉ် အချို့ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ လေယာဉ်သည် အိဒ်နေ့ အားလပ်ရက်အတွက် ခရီးထွက်လာသူများကို တင်ဆောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ် ကျူးကျော် ဝင်ရောက်လာသည့် ကျန်နွားနှစ်ကောင်၏ ကံကြမ္မာကို မသိရသေးချေ။
လေယာဉ်မှူး အိုင်ဝမ်ပါမာဒီက "လေယာဉ်နဲ့ နွားနဲ့ တိုက်မိလိုက်တဲ့နောက် အသားမီးကျွမ်းတဲ့ အနံ့မျိုးတောင် ရမိတယ်"ဟု သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ ဘမ်ဘန်းအာဗန်းက "ပြေးလမ်းပေါ်မှာ နွားသုံးကောင် ရောက်နေတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်ကောင်ကတော့ လေယာဉ်ဝင်တိုက်တာ ခံလိုက်ရပါတယ်"ဟု ဆိုသည်။ လေယာဉ်မှူးသည် အစောပိုင်းက ဝင်တိုက်မိသည့် တိရစ္ဆာန်ကို ခွေးတစ်ကောင် ဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းမိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်မှ နွားတစ်ကောင်မှန်း သိရှိလာခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး စနစ်သည် လုံခြုံမှု အပိုင်းတွင် အာရှတိုက်၏ အဆိုးဆုံး စာရင်းဝင် နာမည်ပျက်မျိုး ရှိနေသည်။ ဧပြီလက Lion Airမှပင် လေယာဉ်တစ်စင်းသည် ပြေးလမ်းပေါ် ဆင်းသက်စဉ် တိတိကျကျ မရောက်သဖြင့် ဘာလီကျွန်းအနီး သမုဒ္ဒရာထဲသို့ ဝမ်းဗိုက်ဖြင့် ဆင်းသက်ခဲ့ရပြီး ထိုစဉ်က ခရီးသည် (၁၀၄)ဦးလုံး အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ Lion Airသည် လာမည့် (၁၀)နှစ်အတွင်း လေယာဉ်အစင်း (၁၀၀၀)ထိ ပိုင်ဆိုင်လာရန် မျှော်လင့်ထားသည့် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး လတ်တလောတွင် Airbusနှင့် Boeingတို့မှ လေယာဉ်ကြီးများကို မှာယူထားသည်။ ယခုပြဿနာတွင် ပြေးလမ်းပေါ် နွားများ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ရောက်နေသည်ကို စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံ ပေါ်တွင် ထင်ရှားခဲ့သူ ဖြစ်ရုံသာမက ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကပါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလားအလာရှိသူ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နှင့် (၂၅)နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံးငွေရတု အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Voice ။ ။ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေက အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်နေပြီလို့ သုံးသပ်သူတွေ ရှိပါတယ် အဘရော ဘယ်လို သုံးသပ်မိထားလဲ ခင်ဗျ။
UKN ။ ။ စီးပွားရေးအရရော၊ လူမှုရေး အရရော အနောက်နိုင်ငံတွေက အားလုံးပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အနေအထားကနေ ဖွင့်ပေးနေပြီ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အားပေးနေပြီ။ တိုက်တွန်းနေပြီ။ အဲဒီလို အခြေနေမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခြေအနေကောင်းပဲ။၂၀၁၅မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်။၂၀၁၅ (ခုနှစ်) နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ရောက်ချင်မှ ရောက်မှာ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး။ အနာဂတ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ ခက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ခုလိုအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခြေအနေ ကောင်းပဲ။
UKN ။ ။ အဲလိုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့သူ အားလုံး၊ အဖွဲ့အစည်း အားလုံး၊ တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံး တက်ညီလက်ညီ လုပ်ဆောင်ရမယ်။ တက်ညီလက်ညီလုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း တစ်စိတ်တည်း တစ်ဝမ်းတည်း ပဲပေါ့ကွာ။ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဖို့ပဲကို။ လက်ရှိ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးက သိပ်နောက်ကျနေတာကွ။ စီးပွားရေး မြင့်မားဖို့၊ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝ မြင့်မားဖို့ တစ်စိတ်တည်း တစ်ဝမ်းတည်း ထားပြီး မင်းလုပ်တာလည်း ငါကူ၊ ငါလုပ်တာလည်း မင်းကူ ဆိုတာမျိုး အပြန်အလှန် လေးစားမှု အပြန်အလှန် ကူညီချင်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ သဘောထား ဖြူစင်မှုရှိစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ရင် တို့တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ကောင်းရာကောင်းကျိုး ဖြစ်မှာပဲ။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်စီ သူကလည်း ဟိုဟာလုပ် ငါကလည်းဒီဟာလုပ်မယ် ဆိုပြီး စိတ်ဝမ်းတွေ ကွဲနေရင်တော့ တို့တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့ တော်တော်ခက်တယ်ကွ။ ဒါပဲ၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ပဲ။
UKN ။ ။ ခုချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးက တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပဲ။ တိုင်းပြည်က စည်းလုံးညီညွတ်ရမယ်။ အဲဒါနဲ့ စီးပွားရေးဘဝ ကောင်းမွန်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက တစ်ဆက်တည်းပဲ။ အဲဒီနှစ်ခုက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးက တိုင်းပြည်တက်လာမယ်။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးတက်လာပြီး မညီညွတ်ရင်လည်း တိုင်းပြည်က တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွ။ အားလုံးက စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဘဝ၊ အေးချမ်းတဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်ထွန်းနေတယ် ဆိုရင်တော့၊ တိုင်းပြည်က စီးပွားရေးလည်း တက်လာရင်တော့ တို့တိုင်းပြည်က အများကြီး ဖွံ့ဖြိုးလာမှာ။ တို့နိုင်ငံမှာ သဘာဝသယံဇာတတွေ အများကြီး ရှိတယ်ကွာ။ လူသား အရင်းအမြစ်တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်ကွာ။ အခြေခံ အကြောင်းတရားပေါ် မူတည်ပြီး ရှိနေတာက အခြေခံ အကြောင်းတရား ဆိုတာက စောစောကပြောတဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိရမယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရမယ်။ နောက် စီးပွားရေးဘဝတက်ဖို့ တက်ညီလက်ညီ အားလုံးလုပ်ရမယ်။ ဒါဆို တို့တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပဲကွ။ တစ်ယောက်တစ်စ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် နဲ့ လုပ်နေကြရင်တော့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ တော်တော် ခက်တာပဲကွာ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သူ့ကိုလည်း အပုပ်ချ၊ ကိုယ့်ကိုလည်းအပုပ်ချ။ အဲဒီလို လုပ်နေကြရင်လည်း တိုင်းပြည်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူးကွ။
Voice ။ ။ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ အဘရဲ့ သမိုင်းအမြင် ၈၈ မှာရော၊ ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ရော အဘရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အတော်လေး အရေးပါခဲ့တော့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမိုင်းအရ သုံးသပ်ပေးပါဦး။
UKN ။ ။ လောလောဆယ် ဘာလုပ်မလဲ။ အကောင်းဆုံး လုပ်ရမယ့်ဟာကို စဉ်းစားပါ။ အတိတ်က ဟာတွေကို ပြန်ပြီးတော့ လုပ်မနေနဲ့တော့။ အတိတ်က ဟာတွေကို သင်ခန်းစာယူပါ။ အနာဂတ်မှာ ကောင်းရာကောင်းကျိုး စဉ်းစားမယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည် တိုးတက်မှာပဲ။ ဒီမယ် သမိုင်းဆိုတာက ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းက ကောင်းတဲ့သမိုင်း ဖြစ်မှာပဲ။ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းက မကောင်းတဲ့သမိုင်း ဖြစ်မှာပဲ။ သို့သော်ငြားလည်း ဟိုလူကပြော ဒီလူကပြော ပါးစပ်ကထွက်တဲ့ဟာက သမိုင်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ သူဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဟာက သမိုင်းဖြစ်မှာပဲ။
- ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်။
ပျိုမေများ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတောင့်များကို အသုံးမပြုခင်မှာ လက်ဖ၀ါးပေါ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် အရင် ဆိုကြည့်ပြီး ရွှေ(လက်စွပ်)နဲ့ ပွတ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့
တကယ်လို့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးအရောင်က မူလအရောင်ကနေအမည်းရောင်သို့ ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူးတဲ့ဗျာ
ဘာလို့ဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးထဲမှာ ခဲ(ခဲပုပ်)ပါဝင်နှုန်းများနေလို့ပါတဲ့
ခဲပုပ်ပါဝင်နှုန်းများခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ကင်ဆာရောပါဖြစ်စေလို့ပါပဲတဲ့
ရောဂါကို ကုသခြင်းထက် မဖြစ်ခင်က ကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးပါ
ကျန်းမာခြင်းဆိုသော လာဘ်တစ်ပါးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ
Ps - Dr. Elizabeth Ayoub လို့ google မှာ ရှာလိုက်ရင်လည်း နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး အန္တရာယ်အကြောင်း(အကျယ်တ၀န့်)ကို ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်